အျမန္လမ္းမွာ ကားတာယာေတြ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ပြင့္ရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
Home > နည္းလမ္းမ်ား > အျမန္လမ္းမွာ ကားတာယာေတြ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ပြင့္ရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္း
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) 7:11 AM နည္းပညာဗဟုသုတ, နည္းလမ္းမ်ား
Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္အျမန္လမ္းမွာ ကားတာယာေတြ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပြင့္ရလဲဆိုတာ အေျဖေပၚပါျပီ။။။ကားသမားတိုင္းသိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္
ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမၾကီးမွာ ကားတာယာေတြ ခဏခဏပြင့္ေၾကာင္း ၾကားမိတာၾကာပါျပီအစကေတာ့ လမ္းက ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လို႔
အလြယ္ပဲထင္မိပါတယ္. ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ့္ကားတာယာ လဲစဉ္က ဖတ္မိတာကိုသတိရျပီး သူငယ္ခ်င္းတို႔လဲ သတိထားမိေအာင္ share ေပးလိုက္ပါတယ္
အရင္ဆံုး တာယာေဘးက ေရးထားတဲ့ ဂဏန္းေတြကို ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ပါဥပမာအေနနဲ႔ P195/60R15 87S ဆိုပါစို႔…
ေရွ႕က ဂဏန္းေတြကေတာ့ တာယာအရြယ္အစားကုိ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ေနာက္ဆံုး 87S ဆိုတာကို ဟာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး အတြက္ အေရးပါပါတယ္။
87 ဆိုတာကေတာ့ တာယာရဲ့ အေလးခ်ိန္ ခံႏိုင္ဝန္အားပါ။ ဒီဥပမာထဲက တာယာဆိုရင္ အနီးစပ္ဆံုး 1201 pound (545 kg) ထိခံႏိုင္ရည္ ရွိပါတယ္။
ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုတင္ပါက တာယာပြင့္တဲ့ အႏၱရာယ္ကိုရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။
ပံုမွန္လူစီးကားေတြ ထရပ္အငယ္စားေတြအတြက္ 70-110 ထိ ခံႏိုင္ရည္အားကို သတ္မွတ္ ထားတတ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္ပါစာရင္းဇယားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အမြန်လမ်းမှာ ကားတာယာတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပွင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန်အမြန်လမ်းမှာ ကားတာယာတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပွင့်ရလဲဆိုတာ အဖြေပေါ်ပါပြီ။။။ကားသမားတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်နော်
ရန်ကုန် နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ကားတာယာတွေ ခဏခဏပွင့်ကြောင်း ကြားမိတာကြာပါပြီအစကတော့ လမ်းက ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လို့
အလွယ်ပဲထင်မိပါတယ်. နောက်မှ ကျွန်တော့်ကားတာယာ လဲစဉ်က ဖတ်မိတာကိုသတိရပြီး သူငယ်ချင်းတို့လဲ သတိထားမိအောင် share ပေးလိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး တာယာဘေးက ရေးထားတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါဥပမာအနေနဲ့ P195/60R15 87S ဆိုပါစို့…
ရှေ့က ဂဏန်းတွေကတော့ တာယာအရွယ်အစားကို ဖော်ပြထားတာပါ။နောက်ဆုံး 87S ဆိုတာကို ဟာ အန္တရာယ်ကင်းရေး အတွက် အရေးပါပါတယ်။
87 ဆိုတာကတော့ တာယာရဲ့ အလေးချိန် ခံနိုင်ဝန်အားပါ။ ဒီဥပမာထဲက တာယာဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံး 1201 pound (545 kg) ထိခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။
ဒီသတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုတင်ပါက တာယာပွင့်တဲ့ အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်လူစီးကားတွေ ထရပ်အငယ်စားတွေအတွက် 70-110 ထိ ခံနိုင်ရည်အားကို သတ်မှတ် ထားတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ပါစာရင်းဇယားမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးပိုကြီးတာကတော့ မြန်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တာယာတွေမှာ အမြန်ဆုံး မြန်နှုန်းခံနိုင်ရည်အားကိုလဲ တာယာဘေးမှာရေးထားတတ်ပါတယ်။
1991 ခုနှစ်ကစတင်ပြီး တာယာတွေမှာ မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ကို အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း တသမတ်ထဲ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။အပါ်က ဥပမာ P195/60R15 87S ဆိုရင်တော့.
. နောက်ဆုံးစာလုံးဖြစ်တဲ့ S ကို ကြည့်ပြီး ဒီတာယာအတွက် အမြန်ဆုံး မြန်နှုန်းခံနိုင်အားဟာ 112 mph ( 180 km/h) ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တာယာတွေရဲ့ အမြန်ဆုံး မြန်နှုန်းခံနိုင်အား ကို အောက်က စာရင်းဇယား မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
S 112 mph 180 km/h Family Sedans & Vans <<< from Example Above T 118 mph 190 km/h Family Sedans & Vans U 124 mph 200 km/h H 130 mph 210 km/h Sport Sedans & Coupes V 149 mph 240 km/h Sport Sedans, Coupes & Sports Cars W 168mph 270 km/h Y 186mph 300 km/h Z 149mph+ 240 km/h+ ဆိုပါစို့
tire က max speed rating 160kmh ဆိုပေမယ့် အကောင်းဆုံးလမ်းမှာ tire အသစ်နဲ့ စမ်းသပ် သတ်မှတ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် max speed အထိရောက်အောင် မောင်းဖို့ မသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး tire တွေမှာ expire date နဲ့ manufacture date လဲ ရေးထားတတ်ပါတယ်။ manufacture date ကတော့ အမြဲလိုပါတတ်ပါတယ်။
manufacture date ကို ဘောင်လေးကွပ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ရေးထားတတ်ပါတယ်။ဂဏန်း ၄ လုံးမှာ ရှေ.က ၂ လုံးက တာယာထုတ်တဲ့ အပတ် (week) ဖြစ်ပြီး နောက် ၂ လုံးကတော့ ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလင့် ကပုံပါအတိုင်းဆိုရင် ဘောင်ထဲက YYY နောက်က 1105 ကို ကြည့်ရမှာပါ။၂၀၀၅ ခုနှစ် ၁၁ ပတ်မြောက်မှာ ထုတ်တယ်လို့ ဖတ်ယူ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
အျမန္လမ္းမွာ ကားတာယာေတြ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ပြင့္ရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:11 AM Rating:5Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္ အျမန္လမ္းမွာ ကားတာယာေတြ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပြင့္ရလဲဆိုတာ အေျဖေပၚပါျပီ။။။ကားသမားတိုင္းသိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္ ရန္က...